Fakana an-keriny an’i Anil Karim: olona 20 voasambotra, fianakavian’i Lama ny sasany | NewsMada
Par Taratra sur 11/05/2020
14 andro izay ny lasa! Mbola any am-pelatanan’ny jiolahy i Anil Karim. “Manodidina ny 20 ny isan’ireo olona voasambotra hanaovana fanadihadiana. Tsy amelanay raha tsy tratra ireo mpaka an-keriny ireo…”, hoy ny lehiben’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena (CIRGN) Analamanga, ny Jly Rakotondrazaka Andry.
“Mandroso tsikelikely any amin’ny fahatrarana an’i Lamà sy ny famahana ity fakana an-keriny ity ny fanadihadiana rehetra. Tsy amelanay raha tsy tratra ireo mpaka an-keriny ary tsy hitsitsy ny zandarimaria na iza na iza voarohirohy amin’izany”, hoy ny lehiben’ny CIRGN Analamanga. Nitondra fanampim-panazavana hatrany ity manamboninahitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ity fa mampitandrina sy manao antso avo ho an’ireo mpiray petsapetsa, na fianakavian’i Lamà na tsia, mbola miriaria, fa tsara ho azy ireo ny mamotsotra tsy misy hataka andro an’i Anil na koa mitoroka sy mampandre ny zandarimaria ny toerana anafenana azy na ny misy an’i Lamà sy ny tariny. Nanentana ireo olon-tsotra mety hanam-baovao marina sy hahitam-bokany mikasika ity raharaha ity ny zandarimaria fa arovana tanteraka ny tsiambaratelo sy ny mombamomba ireo manome loharanom-baovao.
Mbola mipetraka ilay tambim-bola 200 tapitrisa Ar…
Nanamafy hatrany ny kaomandin’ny CIRGN Analamanga, ny Jly Rakotondrazaka Andry, fa mbola mipetraka ilay tambim-bola 200 tapitrisa Ar ho an’izay manome vaovao momba ireo jiolahy naka an-keriny an’i Anil sy/na ny toerana itazonan’ireo mpaka an-keriny azy. Ny zandarimaria rahateo, efa nampitandrina fa melohin’ny lalàna ny firaisana tsikombakomba amin’ireo olona efa namoahana didy fikarohana sy/na fanafenana ireny olon-dratsy karohin’ny mpitandro filaminana ireny.
Tsiahivina fa nalaina andian-jiolahy nitondra basy mahery vaika teny Ambohibe Ilafy, ny 27 avrily 2020 lasa teo, i Anil Karim, teratany karana mizaka ny zom-pirenena frantsay, mpandraharaha momba ny fanafody. Namoaka avy hatrany didy fikarohana “wanted” ilay jiolahy raindahiny amin’ny “kidnapping” antsoina hoe Ramandiamanana Norbert na i Lamà ny eo anivon’ny fibaikoana ny zandarimariam-pirenena tamin’ny alalan’ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena (ComGN), ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa, niaraka amin’ny tambim-bola 200 tapitrisa Ar ho an’izay manam-baovao momba ity jiolahy mpamerin-keloka raindahiny ity. Ity jiolahy ikoizana amin’ny “kidnapping” ity no notondroin’ny zandary ho atidoha nikotrika ny fakana an-keriny an’i Anil. “Hanao ny herinay rehetra izahay amin’ny fisamborana io olona io”, hoy ny ComGN. Mandray an-tanana ity raharaha ity ny borigady misahana ny ady amin’ny fakana an-keriny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena.